Iphakheji lokuvakasha lokuvakasha laseMadhya Pradesh | | Shayela @ + 91-993.702.7574 Ukubhuka.
Iphakheji lokuvakasha laseMadhya Pradesh
Inhliziyo ye-India iyipharadesi engakabonakali yendawo yokuvakasha elindele ukuhlolwa. Igcwele amagugu amasiko amasiko, izikhumbuzo ezibonakalayo, amahle amahle, izilwane zasendle ezihlukahlukene, izindawo ezifudumalayo zomoya, i-lip-smacking cuisine kanye neminye imizi eqhubekayo nehlanzekile kakhulu eNdiya! Kuyinto engcebweni yezinto ezikhangayo kakhulu futhi okuhlangenwe nakho okuhamba lapha kanye, ngeke nje kwanele. Iphakheji lezokuvakasha leholide laseMadhya Pradesh lizokunika ithuba lokuhamba kuleli zwe elingakaze lisetshenziswe. Madhya Pradesh yisifundazwe sesibili ngobukhulu ngokuphathelene nendawo. Umkhathi omkhulu wendawo yalesi simo uye wabangela izindawo ezihlukahlukene ezivela ezindaweni ezivela ezintabeni kuya emaphandleni kuya emahlathini aminyene. Iphakheji lezokuvakasha laseMadhya Pradesh likuyisa eKhajuraho evelelekayo, iPanna ne Bandhavgarh National Parks, izindawo ze-UNESCO World Heritage Sites zeSanchi neBhimbetka, iBhopal ekhangayo, iPanchmarhi enobumnandi kanye noMandu okhangayo. Izinto ezikhangayo, izilwane zasendle ezivusa amadlingozi, i-gastronomy esiphundu, ifa elikhazimulayo namasiko, konke kudala izinkumbulo ezijabulisayo zamaholide. Yenza ngokwezifiso iphakethe lakho lokuvakasha laseMadhya Pradesh, ngokuvumelana nezidingo zakho, siyajabula njalo ukukusiza ukuhlela uhambo lwakho. Lungele ukuzwa amathafa amahle, amasiko amasiko futhi ugubhe isiko leqiniso laseMadhya Pradesh neSand Pebbles eMadhya Pradesh Holiday Tour Package.
I-Pachmarhi (2N) - Jabalpur (1N) - Amarkantak (1N) - I-Bandhavgarh (2N)
Uhlelo lwe-06 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 163
USUKU LWE-01: I-ARRIVAL AT PACHMARHI
Uhambo lwethu luqala kusukela ekufikeni ePachmarhi. Ukuze ufike ePachmarhi, esiteshini sesitimela sasePipariya esiseduze futhi uhlobene nezitimela eziqondile ezivela eNew Delhi, eBhopal, Mumbai, Kolkata, e-Varanasi, e-Agra, e-Pune, e-Ahmedabad njll. Labo abaza ngendiza bangafinyelela ezindiza zezindiza zeBhopal noma zeJabalpur. Lapho ufika ePachmarhi, phumula ehhotela bese uvakashela imakethe yasendaweni noma izindawo eziseduze zokuvakasha ezifana neJata Shankar, iPandav Caves njll Ngobusuku ehhotela e-Pachmarhi.
Yenza usuku olugcwele lokubuka lapho uvakashela khona uReechgarh, uHandi Khoh, Dhoopgarh, Bade Mahadev, Gupt Mahadev njll. Kunezindawo ezithile ePachmarhi lapho izimoto zamatekisi zingavunyelwe khona ukuwa kwe-Apsara, i-Bee Fall, i-Dhoopgarh njll ngakho-ke gypsy yiyona indlela engcono kakhulu yokubona indawo. Ngobusuku ehhotela e Pachmarhi.
DAY 03: PACHMARHI - JABALPUR
Kulolu suku, emva kokudla kwasekuseni, sizoshayela endaweni esilandelayo "Jabalpur idolobha". Indawo yokuvakasha eyaziwayo iBedaghat iyi-15kms nje ngaphambi kwedolobha laseJabalpur ngakho sizovakashela le ndawo futhi sidle kwasemini lapho. E-Bhedaghat ungakwazi ukuhamba ngemikhumbi, ukuhamba nge-ropeway, ukuthwebula izithombe kanye nezinye izinto zokuthenga nge-marble. Kamuva qhubeka kuhhotela e Jabalpur. Ngobusuku ehhotela e Jabalpur.
DAY 04: JABALPUR - AMARKANTAK
Ngemuva kokudla kwasekuseni, hamba ukuya endaweni engcwele e-Amarkantak (245kms / 05: 00hrs). Yindawo egciniwe ye-hill station cum yezivakashi. Indawo yendawo isendaweni yokuhlangana yamagquma aseTatpura & Vindhyachal. Ihlathi layo lihlanganisa izinhlobo ezithile zezitshalo ezingavamile ezinemfanelo ephakeme yokwelapha. Umfula oNgcwele uNarmada, futhi umthombo wokuphila we-Central India, uvela lapha. Lapha sizovakashela amathempeli asezindaweni zasendulo, umfula ovela emfuleni iphuzu futhi sijabulele ubuhle bemvelo emagqumeni nasemapulazini azungezile. Ngobusuku ehhotela e-Amarkantak.
DAY 05: AMARKANTAK - BANDHAVGARH
Jabulela ukuphuma kwelanga e-Amarkantak futhi ngemva kokudla ukudla kwasekuseni, ushayela ukuhamba ngezinyawo zasendle endaweni yase-Bandhavgarh (270kms / 05: 30hrs). I-Bandhavgarh iyindawo epakikazi evelele yokubheka i-tiger ngenxa yobuningi bezilwane zasendle. I-Tiger reserve itholakala enyakatho ye-Amarkantak. Sizolinga ukufika eBhanhavgarh kuze kube semini ukuze sikwazi ukuya kusihlwa safari drive. Ngemuva kokudla kwasemini, sizoya e-jungle safari. Ngobusuku e-resort e-Bandhavgarh.
Yiya emotweni yokuhamba ekuseni nakusihlwa. Ipaki kazwelonke yaseBanghavgarh isakazwa phezu kwezintaba zaseVindhyan ezinezindawo ezinamahlathi ezincane ezimbalwa. Ubukhona benqaba enqabeni ephakathi kwehlathi kubonisa ukuthi abantu babehlala lapha ngesikhathi sokubusa kweBala. Kamuva ngokushintshwa kwezimali ezivela eBandhavgarh kuya eRewa, le ndawo yalahlwa futhi isimo semvelo sithatha indawo. Noma kunjalo ungathola ithempeli lamaHindu elisebenzayo, elihlangene ne-Bandhavgarh fort. Leli hlanga lilungele ukuthwebula izithombe njengoba abantu babo bephilile futhi e-Bandhavgarh ukunyakaza kwabo baziwa kakhulu ngokuqondiswa kwe-safari. Ngobusuku e-resort e-Bandhavgarh.
Lokhu kuzoba usuku lwethu lokugcina e-Bandhavgarh nakwezokuvakasha. Njengesikhathi sokuhamba kwethu, ungahamba ngesinye se-safari ekuseni bese ushayela eziteshini zesitimela esiseduze njenge-Umaria (37kms), i-Katni (100kms) noma iJabalpur (190kms). Uma ufisa ukuthatha indiza uze ufike esikhumulweni sezindiza se-Jabalpur (200kms) noma sezindiza ze-Khajuraho (250kms).